Fri, Jun 22, 2018 | 09:33:00 NST
13:26 PM (5years ago )
संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन भएको डेढ महिना बितिसक्दापनि चुनावको मिति घोषणा हुन सकेको छैन ।
कात्तिक अन्तिम वा मंसिर पहिलो हप्ता चुनाव गर्ने बताइरहेका राजनीतिक दलहरु सरकारले चुनावको मिति घोषणा नगरेकोमा असन्तुष्ट छन् ।
यसै सन्दर्भमा चुनावका लागि सरकारले गरेको तयारीबारे उज्यालो अनलाइनका दीपेन्द्र कुँवरले गृहमन्त्री माधव घिमिरेसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । कुराकानीको सारसंक्षेपः
चुनावको तयारी कहाँ पुग्यो ?
चुनावको तयारी जारी छ । कात्तिक अन्तिम वा मंसिरको पहिलो हप्ता चुनाव गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । चुनावका लागि आवश्यक संविधा सभा सदस्य निर्वाचन ऐन निर्माण भैरहेको छ । यो कानूनी प्रश्न हो ।
सरकार जतिसक्दो छिटो कानुनी व्यवस्था गर्न लागि परेको छ । निर्वाचनमा सबै दलको सहभागिता रहोस् भनेर प्रयत्नशील छौँ । अर्को चुनावमा व्यापक राजनीतिक सहभागीताका लागि सरकार लागीरहेको छ । वार्ता पनि गरिरहेको छ ।
दलहरुले सरकारले मिति घोषणा नगर्दा ढिलाइ भयो भनिरहेका छन् नि ?
मिति घोषणा नहुँदैमा वातावरण नबनेको भन्न मिल्दैन । छिटो भन्दा छिटो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकार प्रयत्नशील छ । राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता गरिरहेका छौं । ऐन निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । मिति घोषणा नहुँदैमा चुनावी वातावरण नबनेको भनेर आशंका गर्नु उचित हैन ।
उसोभए निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको छैन भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
यो ब्याख्या अलि गलत भयो की जस्तो लाग्छ । राजनीतिक दल लागिरहेका छन, सरकारले आफूलाइ पुरै केन्द्रित गरेको छ । जनतामा चुनावको माहौल तयार भैसकेको छ । त्यसैले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेन भन्दैमा वातावरण बनेन भन्नु जायज हुँदैन, जनता र राजनीतिक दल चुनाव चाहिरहेका छन् ।
केही दलले आफ्ना असन्तुष्टिहरु राखेका छन् । सरकार सबै दललाई निर्वाचनमा ल्याउन प्रयासरत छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा कहिले हुन्छ त ?
यो अलि गणितीय प्रश्न भयो । यसको ठ्याक्कै उत्तर यही भन्न त कठिन नै हुन्छ । हामी सबै पक्षसँग छलफल र संवादमा छौं । कानुनी र राजनीतिक आधार बन्ने बित्तिकै चुनावको मिति घोषणा भैहाल्छ ।
ऐनमा मिल्न नसकेका कुरा के हुन् ?
ऐनलाई सर्वमान्य बनाउन प्रयास गरिरहेका छौं । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा ‘थ्रेसहोल्ड’ का कुरा पनि छन् । यी सबै विषय मिलाउने प्रयास जारी छ । केही मत–मातान्तर देखिएका छन्, त्यसलाई स्वभाविक मान्नुपर्छ ।
हामी यी विषयमा राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेका छौं । सरकार पनि विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावलाई समेटेर अघि बढ्छ ।
तपाईं सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक हुनुहुन्छ । सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग पनि उठेका छन् । छलफल र वार्ता कसरी अघि बढेको छ ?
यो सरकार विस्थापन हुँदैन । यो सरकारको मुख्य दायित्व संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर मुलुकको राजनीतिलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने हो । मुलुकको मुल मुद्दा पनि यही हो । त्यसैले यो सरकारलाई हटाउने भन्ने कुरै आउँदैन । मुलुकको राजनीति कहिलेसम्म बिग्रिरहने भन्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।
संविधान निर्माणको विषयलाई ओझेलमा राखेर अरु मुद्दा अगाडि ल्याउन हुँदैन । सबै राजनीतिक दलको नेतृत्वले पनि यो कुरा बुझ्नुभएको छ । सबै पक्षलाई सरकारको यही आग्रह रहन्छ ।
कतिपय दलहरु वार्ता गर्न मानिरहेका छैनन् । के अनौपचारिक कुरा भैरहेको छ ?
उहाँहरुले हामीसँग चुनावमा भाग लिँदैनौं भन्नु भएको छैन । तर म विश्वस्त छु उहाँहरुले निर्वाचनमा भाग लिनुहुन्छ । हामी भनेकै दिन निर्वाचन सम्पन्न गर्छौं । सरकार त्यसैको वातावरण बनाइरहेको छ ।
मतदाता नामावली संकलनमा त अवरोध भैरहेको छ । कसरी वातावरण बन्यो भन्ने ?
राजनीतिक रुपमा कसैले आफ्नो धारणा राख्नु अनुचित हैन । तर निर्वाचनको वातावरण बनिसकोले सबै दलले निर्वाचनमा भाग लिन्छन् भन्ने सरकाको विश्वास हो । सरकारले निर्वाचन गरेरै छोड्छ ।